माइतिघर मण्डलामा प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीको ज्यादती – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
माइतिघर मण्डलामा प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीको ज्यादती
डा. महेशमानसहित दर्जनौ गिरफ्तार रअन्य कयौं घाइते
प्रकाशित मिति : २०७६ जेष्ठ २६
काठमाडौं । सरकारले ल्याएको संशोधित गुठी विधेयकको विरोधमा माइति घर मण्डलामा प्रदर्शनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीहरुमाथि प्रहरीले ज्यादती गरको छ । प्रहरीको हस्तक्षेप र ज्यादतीका कारण डा. महेशमानसहित आधा दर्जन गिरफ्तार भएका छन् भने अरु कैयौं घाइते बनाइएका छन् । शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमाथि भएको प्रहरीको बर्बरतापूर्ण हस्तक्षेप र आक्रमणको सर्वत्र निन्दा गरिएको छ ।
प्रहरीले प्रदर्शनकारीहरुमाथि लाठी चार्ज गरी दमन र हस्तषेप गर्दा जनताको विसाल पंक्तिमाथि पानीको फोहराले प्रहार गरेको थियो । केही समयको भीषण झडपपछि प्रहरी तर्फ पनि केही घाइते भएका थिए । प्रदर्शनकारीमाथि निरन्तर पानीको फोहरा प्रहारले तितरवितर पारिएको थियो ।
हस्तक्षेपमा प्रहरीले नेवाः राजनीतिक अभियानका अग्रज तथा संयोजक डा. महेशमान, सम्पदा अभियान्ता अनिश बैद्य, कृष्णगोपाल र विकास महर्जनसहित थुप्रैलाई पक्राउ गरेको छ । प्रदर्शनमा सहभागी नेवाः राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा काठमाडौंका अध्यक्ष नमस्ते सायमीका अनुसार प्रहरी निकै क्रुर तथा अभद्र रुपमा प्रस्तुत भएको र सरकारले आफ्नो दम्भी तथा जनविरोधी चरित्र प्रदर्शन गरेको जानकारी गराएका छन् ।
झडपमा घाइते भएकाहरुको नर्भिक, अन्नपूर्ण न्युरो आदि अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । करिब ५ शयको संख्यामा रहेका प्रदर्शनकारीहरुमाथि प्रहरीले एक्कासी लाठी चार्ज गर्दै पानीको फोहरा फ्यााकेको थियो ।
विरोध प्रदर्शन कार्यक्रममा सम्पदा बचाउ अभियन्ता, गुठीयार, स्थानीय तथा सरोकारवालाहरु विधेयक विरुद्ध सडकमा उत्रिएका थिए ।